Raw Methenolone Acetate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Methenolone Acetate powder ndeyomuromo / injectable anabolic steroid iyo inoshandiswa nevadzidzisi vekugadzira kukurudzira kuwedzera kwemaonda emasisita; kudzivirira musero kupera uye kusimbisa muviri nekushanda nesimba.
Raw Methenolone Acetate powder (434-05-9) Tsanangudzo
Rawone Methenolone Acetate powder, inozivikanwawo se primobolan, inonzi anrogenic anabolic steroid yakabva ku dihydrotestosterone uye inowanikwa sedaro steroid panzvimbo yejojo, uye isina simba uyerogenic properties. Iyo inogona kushandiswa mukurapa kwepfupa remapfupa emapfupa uye anemia, Inoshandiswa nokuda kwepamusoro yehutano hwehutano hwepamusoro uye kuderedza hepatic toxicity yakaenzaniswa neanoriginal XNUMA-alkylated. Metenolone acetate yakatanga kushandiswa kweutano mu17. Zvisinei, inowanzoshungurudzwa mumitambo yevanhu nekuda kwekukwanisa kwayo kuwedzera simba remasimba pamwe nekusimudzira kushanda nekutsamwa. Inokwanisa kukurudzira kushanda mumakwikwi emakwikwi.
Kemikari Name NSC-74226; SH-567; SQ-16496; premobolan
muchiso Name Primobolan, Nibal
Molecular Wsere 344.49
Kunyorera Point 138-139 °
Skukodzera DMSO: <10mg / mL
Storage Temperature pa -20 ° C
APane Se steroid anabolic
Chii chakakosha Methenolone Acetate powder (434-05-9)?
Rawone Methenolone Acetate powder, inozivikanwawo se primobolan, inonzi anrogenic anabolic steroid yakabva ku dihydrotestosterone uye inowanikwa sedaro steroid panzvimbo yejojo, uye isina simba uyerogenic properties. Iyo inogona kushandiswa mukurapa kwepfupa remapfupa emapfupa uye anemia, Inoshandiswa nokuda kwepamusoro yehutano hwehutano hwepamusoro uye kuderedza hepatic toxicity yakaenzaniswa neanoriginal XNUMA-alkylated. Metenolone acetate yakatanga kushandiswa kweutano mu17. Zvisinei, inowanzoshandiswa mumitambo yevanhu nekuda kwekugona kwayo kwekuwedzera simba remasimba pamwe nekusimudzira kushanda nekutsamwa.
Iyo Yakakura Methenolone Acetate Poda (434-05-9) mabasa
Methenolone ishoko reDHT (kana kuti rakanyatsonyatsojeka - inoratidzirwa nenzira yakarongeka yeDHT). Inowedzera kuwedzera kubatana kweka kabhi rimwe uye maviri, iyo inobatsira kuwedzera iyi hormone's anabolic nature. Iyo inotakurawo imwe 1-methyl yeboka inodzivirira iyo kubva pakuparara kwepfungwa. Kuvapo kweAcetate ester kunowedzera kuchidzivirira kubva kune hepatic metabolism.
Oral Primobolan (Methenolone Acetate): Vashandisi vekutanga vaPhmobolan vachawanzoona 50 - 100mg zuva roga roga kuti rive nhengo yakagadzirwa nemuromo Primobolan. Vashandi vepakati vanozivikanwa pamusana pekutamba muromo Primobolan mumutauro we 100 - 150mg zuva nezuva nemigumisiro yakaisvonaka, uye vashandi vepamusoro vachawana huwandu hwe150 - 200mg zuva rega roga kuti ibudirire. Zvinyorwa zvakasiyana zvaP Primobolan ndeimwe yemiromo miviri inonzi anabolic steroid (iyo imwe iyo iri Andriol iyo inobvumirwa nomuromo inopupurirwa Testosterone Undecanoate) iyo isina kupa chero chiyero che hepatotoxicity. Nokudaro, kuwedzera kwemazwi emumuromo Primobolan kunogona kushandiswa asi zvinofanira kuonekwa kuti muromo Primobolan unoramba uchiine chiyero chekudzivirira kugadziriswa uye kuparara muropa, uye saka njodzi yehepatotoxicity kubva kuna Primo haifaniri kuregererwa zvachose, kunyanya Primobolan doses yemutauro wakagadzirwa inowedzera kusvika kune yakakwirira uye yakakwirira.
Vashandisi vechikadzi vachitarisira kuita basa nekusimudzira muviri kubva mumuromo Primobolan vachawana nyaradzo uye vanobatsirwa muZ50 - 75mg zuva rose inotarisana nehuwandu hwakawanda hwekurima.
Raw Methenolone Acetate powder (434-05-9) inobatsira
①Aids mukuvaka musimba- izvi zvinowedzerawo kuitrogen kuchengetedza. Chivakwa chemuviri chinosanganisira nitrogen, uye nokubatsira mu nitrogen kuchengetedza, steroid inosiya mamiriro akakodzera ekuvaka masimba matsva uye kuchengetedza vakwegura.
②Inogadzirisa njodzi yenyika-iyi steroid inonzi inove yakachengeteka mumusika uye vashandisi havafaniri kushungurudzika pamusoro pemagadziro evanhu.
③Inowedzera chiyero chekuparara kwemafuta-ichi ndicho chinangwa chikuru; achibatsira mukugadzira mhepo. Inobatsira mukuderedza huwandu hwemafuta emuviri iyo iyo inobatsira inobatsira musimba yekuvaka uye kuwedzera simba revashandi.
Tenga Methenolone Acetate powder kubva kuBuasas.com
1 Kudzokorora nokuti Raw Methenolone Acetate powder (434-05-9)
Chigadzirwa METHENOLONE ACETATE chakakosha zvikuru.